सरल अफ-पृष्ठ SEO प्रविधि - Semalt बाट संकेत
एसईओ को महत्त्व अब कल प्रदर्शन गर्न को लागी छैन। टेक्नोलोजीको विकासको साथ, एसईओ टेक्निकहरू निरन्तर परिवर्तन हुँदैछन्। यसैले तपाईको साइटलाई कसरी खोज इन्जिनको पहिलो पृष्ठमा देखा पर्ने र विशेष गरी त्यहाँ कसरी रहने भन्ने कुरा जान्न महत्त्वपूर्ण छ।
यस लेखमा हामी हामी ब्याकलिinking्क टेक्निकको बारेमा कुरा गर्ने छौं, गुगलको नतिजा पृष्ठहरूमा तपाईंको स्थिति सुधार गर्नका लागि सबैभन्दा सफल रणनीति।
यदि तपाइँ खोजी ईन्जिनमा पहिलो स्थानमा छिटो देखा पर्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईलाई खोज्न आमन्त्रित गर्दछौं Semalt द्वारा प्रस्तुत पेशेवर सेवाहरू यो कामका लागि।
यस बीचमा, समाधान खोज्न र तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न, म तपाईंलाई अन्तको अन्त सम्म यो लेख पढ्न आमन्त्रित गर्दछु।
तपाईंको पृष्ठमा सुन्दर लिंकहरू सिर्जना गर्न एक सुसंगत तर ढिलो तरीका, तर केही प्रतिष्ठा र मान्यता प्राप्त गर्न लेख मार्केटिंग हो।
लेख मार्केटिंग भनेको तपाईको विषय वा केहि वस्तुको बारेमा केहि लेख लेख्नु हो जुन तपाईलाई रूच हुन्छ र तपाइँको वेबसाइटको बिषयमा सान्दर्भिक छ र केहि महान लेख ब्लगमा बुझाउनुहोस्। बदलामा, यी मान्यता प्राप्त ब्लगहरूले तपाईंलाई तपाईंको पृष्ठमा एक वा दुई लिंकहरू फर्काउँछ।
तपाइँ लेखहरूको सामग्रीको बारेमा विशेष ध्यान राख्नुपर्दछ। यी अद्वितीय हुनुपर्दछ, चोरी भएको छैन र अन्तमा, अन्त्य प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी हुनुपर्दछ।
एकै साथ, तपाइँले तपाइँको रुचि र तपाइँको उद्देश्य पाठकहरु तपाइँको वेबसाइट मा आकर्षित गर्न को लागी कुञ्जी शब्दहरु संग समृद्ध गर्नु पर्छ।
यहाँ लि links्कको आदानप्रदान दुई वेबसाइटहरूको पारस्परिक आपसी सम्बन्धमा सम्बन्धित छ। हालसालैका वर्षहरूमा यो प्रविधि कमजोर भएको छ किनकि नयाँ विधिहरू सिर्जना गरिएको छ जुन सजिलो र छिटो हुन्छ।
तर यदि तपाइँ अडिनुभयो र प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसो भए तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको एक ब्लग मित्र खोज्नुहोस् र लि exchange्कहरू साटासाट गर्नुहोस् वा ठूलो लिंक एक्सचेन्ज समुदायमा सामेल हुनुहोस्।
यस विधिको एक हानि यो हो कि यो धेरै अप्रत्यक्ष, समय खपत हुने र कुनै पनि पनी ग्यारेन्टी हुँदैन कि तपाईंको पृष्ठ सँधै एक अर्कासँग सम्बन्धित छ। उही समयमा, तपाईले पृष्ठ रैंक र लि of्कहरूको प्रासंगिकतालाई सधैं ध्यानमा राख्नुपर्नेछ जुन तपाईले प्रत्येक पल्ट पाउनुहुनेछ।
तपाइँको पृष्ठमा लि get्कहरू प्राप्त गर्नका लागि एक तरीका भनेको यसलाई निर्देशिकाहरूमा सदस्यता लिनु हो। अनलाइन गाईडहरूलाई बुझाउनाले उच्च पृष्ठ र्‍या with्कको साथ पृष्ठहरूबाट एक तर्फी लि links्क सिर्जना गर्दछ।
सशुल्क गाइडहरू र नि: शुल्क गाइडहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो सशुल्क चालक याहू हो, जुन खोज इन्जिन हुन बन्द भयो।
भुक्तान डाइरेक्टरीहरुमा भुक्तान गर्नुको एउटा नतिजा यो हो कि गुगलले यी सशुल्क लिंकहरुलाई दण्ड दिन्छ। त्यसोभए तपाईले भुक्तान गरिएको पृष्ठ सूचीबद्ध गर्ने बारे धेरै सावधान हुनु आवश्यक छ।
धेरै गाइडहरूलाई आपसमा संलग्न गराउन पारस्परिक लि require्क आवश्यक हुन्छ, जुन मैले सिफारिस गरेन किनकि तपाईंले आफ्नो पृष्ठलाई लिंक फार्ममा बदल्नुहुनेछ। त्यो हो, फार्ममा जसले लि bre्क पैदा गर्दछ र तपाइँलाई खोज इञ्जिनहरूले एक स्पामर मानीनेछ।
अर्को सिद्धान्त जुन धेरै मान्य छैन त्यो हो कि तपाईंले "डोफोलो" लि get्कहरू प्राप्त गर्नुपर्नेछ (जस्तै रोबोटहरूलाई तपाइँको भन्दा उच्च पीआरको पृष्ठहरूबाट पछ्याउन दिनुहोस्) किनभने कम पीआरको साथ पृष्ठहरूले तपाईंलाई धेरै फाइदा गर्दैन। डोफोलोको सम्बन्धमा, मँ सहमत छु, तर प्रत्येक लिंकको जुनसुकै कुरा भए पनि यसको मूल्य छ।
उच्च पृष्ठ रैंकको साथ पृष्ठहरूको लिंकहरू अधिक मूल्यवान छन् र कम PR सँग पृष्ठहरू लिंक कम छ तर नगण्य छैन।
ब्लगिंग गुगलको पहिलो पृष्ठमा चढ्नका लागि मुख्य तरिकाहरू मध्ये एक हो। पक्कै तपाईंसँग धेरै जसो ब्लगको साथ केहि गर्न वा पहिले नै तपाईंको आफ्नै कर्पोरेट वा व्यक्तिगत ब्लग रहेको छ। यदि तपाईंसँग ब्लग छैन भने त्यो समस्या हैन, हाम्रो व्यावसायिक सेवाले तपाईंलाई आज आफ्नो ब्लग सेटअप गर्न मद्दत गर्न सक्षम हुनेछ।
ब्लगिंग को साथ शुरू गर्न को प्रक्रिया धेरै सरल छ। निम्न चरणहरू तल दिइएका छन्:
आज बजारमा के आवश्यकताहरू वा खाली स्थानहरू छन् ठ्याक्कै पत्ता लगाउनुहोस् र सम्भावित खरीददारहरूले त्यो आवश्यकता पूरा गर्न खोज ईन्जिनहरूमा के खोजिरहेका छन् पत्ता लगाउनुहोस्।
प्रासंगिक सामग्रीले भरिएको वेबसाइट सिर्जना गर्नुहोस् जुन व्यक्तिलाई त्यो आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको पृष्ठमा आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको ई-समाचार वा ईमेलमा सदस्य बनाउनुहोस्।
विज्ञापन, इन्टर्नेट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटि or वा तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरू बेच्न प्रयोग गरेर तपाईंको दर्शकहरूसँग पैसा कमाउन शुरू गर्नुहोस्।
सम्पूर्ण मार्केटिंग प्रक्रियालाई अप्टिमाइज गर्नुहोस् र स्वचालित बनाउँनुहोस् ताकि तपाईंले आफ्नो व्यापार खुला राख्न दिनभर काम गर्नुपर्दैन।
सामाजिक मिडिया पृष्ठहरू (भिडियो सहित)
सामाजिक नेटवर्किंग साइटहरू द्वारा, हामी यसको अर्थ त्यो सबै सामाजिक मिडिया पृष्ठहरू, सामाजिक बुकमार्किंग, साथै युट्युब जस्ता भिडियो साइटहरू हुन्। सामाजिक नेटवर्किंग को लक्ष्य बहु हो। हामी मुख्य रूपमा एसईओ दृष्टिकोणबाट निम्नमा इच्छुक छौं:
हाम्रो पृष्ठ को लोकप्रियता वृद्धि गर्न
हाम्रो पृष्ठमा विभिन्न सामाजिक नेटवर्कि pages पृष्ठहरूबाट डोफलो र नफोलो लिंकहरू प्राप्त गर्न
हाम्रो पृष्ठहरू खोज इन्जिनहरू भन्दा छिटो अनुक्रमणिका गर्दैछ (ट्विटरको अर्को प्रयोग)
शीर्ष-निशान सामग्री सिर्जना गर्नुहोस् जुन सोशल मीडियामा (भाइरल सामग्री) मा लिंक र साझेदारी गर्न सकिन्छ
पोष्टको प्रकार एक रातमा तपाइँको पृष्ठ सामग्री प्रचार गर्न छोटो र द्रुत तरीका हो! यो प्राय: नि: शुल्क पनि प्रदान गरिन्छ!
प्रेस विज्ञप्ति लगभग to०० देखि words०० शब्दहरूको लेख भन्दा बाहेक अरू केही छैन जुन तपाईंको पृष्ठले प्रदान गरेको अनुपम सेवा वा उत्पादन समावेश गर्दछ र तपाईं यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ।
तपाईं वितरण च्यानलहरू यो सयौं अनलाइन मिडियामा स्वचालित र इलेक्ट्रोनिक रूपमा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, केहि निःशुल्क छन् र केहि भुक्तान गरिन्छ।
प्रेसमा, पोष्टले तपाइँको पृष्ठ र तपाइँको अनौंठो सेवाको साथै लक्षित पृष्ठको एक लिंक (लैंडि to पृष्ठ) लाई तपाइँ प्रचारकहरू भेट्न चाहानुहुन्छ प्रचार गर्दछ।
लक्ष्य पृष्ठ होमपेज वा तपाईंको साइट भित्र केहि अन्य पृष्ठ हुन सक्छ जुन प्राय: जसमा भिडियो वा पाठ प्रस्तुतीकरण र दर्ता फारम हुन्छ। (अप्ट-इन फारम) सुनिश्चित गर्नुहोस् की लक्षित पृष्ठ लिंक तपाईले खोज्नु भएको कुञ्जीशब्दहरूमा।
आरएसएस वास्तवमा सिम्पल सिन्डिकेशनको संक्षिप्त रूप हो र तपाइँको ब्लग अपडेटहरू ईमेल मार्फत वा यी अपडेटहरू पढ्ने प्रोग्राम मार्फत प्रचार गर्ने बारेमा हो।
धेरै जसो WordPress ब्लगहरू आज स्वत: यो विकल्प हुन्छन् र स्वत: सदस्यता बटनहरू समावेश गर्दछन्।
आरएसएस फिडहरू अब अप्रचलित मानिन्छ र धेरै कम्पनीहरूले तिनीहरूलाई ईमेल मार्केटिंग र सोशल नेटवर्कि onमा फोकसको साथ त्याग्न थालेका छन्।
इन्टरनेट अद्भुत ठाउँ हो! तपाईं जेसुकै चिन्ता गर्नुहुन्छ, त्यहाँ उत्तर छ इन्टरनेटमा! गुगलमा केहि सोध्न वा खोज्नको लागि परीक्षण गर्नुहोस्। परिणामहरू मध्येको पहिलो स्थानहरूमा ब्लाग र फोरमहरूबाट लेख र उत्तरहरू देखा पर्नेछ।
फोरमहरू ठूला प्रयोगकर्ता समुदायहरू हुन् जहाँ विश्वभरका मानिसहरूले विचारहरू, विचारहरू, प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, र आलोचनाहरू गर्छन्।
फोरम मार्केटि aboutको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईंसँग खोजी ईन्जिनबाट फाइदा लिनको लागि एउटा आवश्यक पर्दैन। केही केहि सम्मिलित हुनुहोस् र तपाइँ तपाइँको पृष्ठ खोज इंजिन मा मैदान बढिरहेको देख्नुहुनेछ।
धेरै फोरमहरूको उच्च पृष्ठ रैank्क र उच्च ट्राफिक छ र कुनै पृष्ठ तपाईंको लिंकमा Google मा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको फोरमबाट लिंक सिर्जना गर्नु हो जुन तपाईंको पृष्ठमा फर्कन्छ। फोरम छनौट गर्दा तपाईंले ध्यान दिनुपर्ने चीजहरू हुन् जहाँ तपाईं टिप्पणी वा सक्रिय हुनुहुन्छ:
लक्ष्य बजार मा एक प्रभाव छ
क्षेत्र मा राम्रो संग स्थापित र दिगो रहो
एक उच्च PR छ
सक्रिय हुनुहोस् र धेरै सक्रिय सदस्यहरू छन्
तपाईंको डिजिटल हस्ताक्षरको आयातको साथै dofollow लिंकलाई अनुमति दिन्छ
त्यसोभए एक पटक तपाईले सान्दर्भिक फोरमहरू फेला पार्नुभयो भने, तपाई कुनै शीर्षक वरपर पोष्ट र लेखहरू सिर्जना गर्न सुरू गर्न सक्नुहुनेछ वा अवस्थित शीर्षकहरूमा जवाफ दिँदै, सधैं आफ्नो हस्ताक्षर र कीवर्डहरूलाई कुञ्जीशब्दको रूपमा छोड्नुहोस्।
प्राधिकरण पृष्ठहरूबाट लिंक प्राप्त गर्नुहोस्
पृष्ठहरू हाई प्रोफाइल (उच्च प्राधिकरण पृष्ठहरू) वा प्राधिकरण पृष्ठहरू ब्लगबाट पृष्ठ हुन् जुन उच्च पीआर र विकी प्रकार, सामाजिक मिडिया, विश्वविद्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा सरकारी एजेन्सीहरू र अन्त नाम ईडु, सरकार, संगठन, वा com छ।
त्यस्ता साइटहरू तथाकथित विकीहरू हुन्। विकी एक प्रकारको वेबसाइट हो जसले कसैलाई पनि आफ्नै पृष्ठहरू सिर्जना र सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। विकीमा बिभिन्न व्यक्तिहरू सँगै लेख्न सक्दछन् (एकै समयमा होइन)। यसले धेरै व्यक्तिहरूको कार्य लेख्न सहयोग गर्दछ। यदि एक व्यक्ति गल्ती गर्छ भने अर्को व्यक्तिले यसलाई सच्याउन सक्छ।
यसले पृष्ठमा केहि नयाँ थप्न सक्छ, जुन लगातार सुधार र अपडेटको लागि अनुमति दिन्छ। विकीमा पनि छलफल हुन सक्छ। केहि विकी विकिपेडिया जस्तै सम्भवतः सबैभन्दा प्रसिद्ध विकीले यसको बारेमा वार्ता पानाहरू राख्दछ, तर अन्य विकीमा सबै पृष्ठहरूमा छलफल हुन सक्दछ।
लि get्कहरू प्राप्त गर्नका लागि उत्तम विचार भनेको विकिपेडियामा तपाईंको पहिलो प्रविष्टि लेख्नु हो। यद्यपि मलाई यो गर्न धेरै गाह्रो लाग्छ र धेरै समय खपत; यदि तपाइँ सफल हुनुभयो भने तपाइँसँग प्रतिस्पर्धी फाइदा हुनेछ!
गुगल मेरो व्यवसाय
एउटा गुगल खोजी विकल्प गुगल मेरो व्यवसाय वा संक्षिप्त GMB हो। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको गुगलको स्थानीय व्यापार निर्देशिकामा तपाईको व्यवसाय समावेश छ। यसले तपाईंको गुगल खोजी परिणामहरूमा केही थप क्लिकहरू दिनेछ।
तपाईंले गर्नुपर्ने पहिलो चीज भनेको गुगल स्थान खाता बनाउनु हो।
एकै समयमा, तपाइँ तपाइँको पृष्ठ मा उपहार वाउचर संग पदोन्नतिहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँका सेवाहरूको लागि समीक्षा लेख्न सक्नुहुन्छ।
विशेष गरी जब यो एक स्थानीय व्यापारको लागि आउँदछ जुन स्थानीय खोजी परिणामहरूमा श्रेणीकरण गर्न चाहन्छ, Google मेरो व्यावसायको अस्तित्व आवश्यक छ।
व्यक्तिलाई तपाईंको साइटमा लिंक गर्न कारण दिनुहोस्
तपाईंको पृष्ठमा लिंकहरू प्राप्त गर्न उत्तम तरिका भनेको अचम्मको, अद्वितीय, रमाईलो सामग्री हो जुन व्यक्तिहरू अन्यलाई सुझाव दिन चाहन्छन्। त्यसोभए तपाइँको रणनीति यहाँ एक अद्वितीय सेवा वा उत्पादन प्रस्ताव छ कि आगन्तुकहरु लाई आकर्षित गर्नेछ र त्यसकारण तपाइँलाई लिंकहरू सिर्जना गर्दछ।
फेरि तपाइँले निःशुल्क प्रदान गर्न महान मूल्यको केहि सिर्जना गर्नुपर्दछ, यो एक ई-पुस्तक, एक कोर्स, एक भिडियो श्रृंखला, वा रिपोर्टहरू जहाँ चीजहरू शंकास्पद आकर्षक छन्। त्यसैले अन्य वेबसाइटहरू तपाइँसँग लि l्क गर्न सुरू गर्दछ र ट्राफिकको अतिरिक्तमा सिर्जना गर्दछ आफ्नो स्थिति सुधार गर्नुहोस् खोजी ईन्जिनहरूमा।
बेसिक एसईओ गल्तीहरू त्याग्दै
खोज इन्जिनलाई रोक्न खोज्ने धेरै नयाँ भर्तीहरू गल्ती र मिसटेप्स गर्दछन्। सम्पूर्ण समझदारी प्रक्रिया परीक्षण र त्रुटिमा आधारित भएकोले यसले बुझ्छ। सबै पछि, अभ्यास उत्तम बनाउँछ।
तपाईंको लागि भर्तीहरू, म यो दर्साउन चाहन्छु कि एसईओ, कुनै पनि व्यवसाय जस्तै, म्याराथन हो र एक द्रुत सडक होइन। यति धेरै एसईओमा असम्बन्धित तत्काल परिणाम खोज्छन् जबकि अझै एसईओको आधारभूत सिद्धान्तहरू पूर्ण रूपमा बुझ्दैनन्।
एसईओ को लक्ष्य एक प्रतिस्पर्धी वातावरणमा दीर्घकालिक परिणामहरू सिर्जना गर्नु हो।
यस लेखलाई निष्कर्षमा राख्न, म तपाईंलाई आमन्त्रित गर्दछु यी केही सुझावहरूको अनुसरण गर्नका लागि सुरक्षित र दिगो सम्बन्धहरू निर्माण गर्न:
दीर्घ-अवधि वा दीर्घ-अवधि लिंकहरू निर्माण गर्नुहोस्। अस्थायीमा होइन तर स्थायीमा लक्षित गर्नुहोस्।
लि campaign्क निर्माण प्रक्रिया निरन्तर तपाईंको अभियान भर निरन्तर जारी राख्नुहोस्। उदाहरण को लागी, हप्ता को एक दिन सेट गर्नुहोस् कि तपाई केवल यो गर्नुहुनेछ, वा महिनाको लागि दिनको केहि घण्टा।
लिंक निर्माण प्रविधिको मिश्रण प्रयोग गर्नुहोस् र केवल एउटा मात्र होइन। समयको साथ तपाईं देख्नुहुनेछ कि तपाईं कुन कुरामा राम्रो हुनुहुन्छ र के तपाईं छैनन्। उदाहरण को लागी, तपाई ब्लगहरु मा टिप्पणीहरु को लागी मनपराउन सक्नुहुन्छ र सामाजिक नेटवर्क वा फोरम लाई प्राथमिकता दिनुहुन्न। तर सही कुरा भनेको विधिहरूको सबै लम्बाई र चौड़ाईबाट लि have्क हुनुपर्दछ। तपाइँको रणनीति फरक र सबै अण्डा एक डालो मा नगर्नुहोस्। यदि गुगलले यसको एल्गोरिथ्ममा सानो परिवर्तन गर्दछ भने, तब तपाईंसँग ठूलो नोक्सान वा ठूलो फाइदाहरू हुनेछन्। जोकर नखोज्नुहोस्।
त्यसो भयो भने, यी सबै रणनीतिहरूले तपाइँलाई खोज इञ्जिनहरूमा तपाईंको स्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। जे होस्, यदि तपाईंलाई केहि बिषयको बारेमा श doubts्का छ वा यदि तपाईंलाई थाँहा थाहा छैन भने कहाँबाट सुरु गर्ने, हाम्रो विशेषज्ञ सेवा तपाईको निपटानमा दिनको २ hours घण्टा सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट तपाइँसँगै जान्छ।
के तपाइँ तपाइँको वेबसाइटसँग सम्बन्धित तथ्या the्कहरू जान्न चाहानुहुन्छ? नि: शुल्क खोज्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!